Shiinaha warshad mashiinka saxaafadda kuleylka qalinka iyo soo saarayaasha | Taile
Qalimaankan Mashiinka saxaafadda Heat waxaa si weyn loogu isticmaalaa noocyada qalimaanta, sida qalimaanta caaga ah, qalimaanta ballpoint, iwm. Saxafadda qalinka ayaa leh gacan lulid ah, shiddo tirinta, maareynta lidka-sibiibixada iyo laba koontaroole dijitaal ah si shaqada wareejinta ay ugu sahlanaato.
1. [Adeegsiga bad-qabka] Gacanta lulaysa / Swing-away waxaa loogu talagalay meel aamin ah oo la dhigo ama la qaado; Xamili Anti-sibiibix ah hawlgalka habboon. nidaamka daabacaadda oo dhan habboon oo ammaan ah. Marka xakamaynta cadaadiska la xiro, qalimaan ayaa lagu hagaajin doonaa miiska shaqada si loo helo saameyn wanaagsan oo daabacan.
Qaado xakamaynta microprocessor iyo xasuusta halbeegga oo leh saxsanaanta kantaroolka sare, guddi taabasho taabasho. Wuu qaadi karaa 360 wareeg oo wareeg ah, fududahay in la qaato walxaha oo lagu wareejiyo sawirka walxaha qaababka gaarka ah leh dhumuc gaar ah. Qaybaha muhiimka ah waxaa laga sameeyay alaabo ceyriin oo tayo sare leh, kuwaas oo xasiloon oo adkeysi badan. Daaweynta rinjiga dusha sare, siman oo heer sare ah. Waad ku mahadsan tahay soosaarida qalabka wanaagsan, alaabada sawirka la sameeyay ayaa xitaa ka sii fiican.
3. [Digital smart control] Heerkulka iyo waqtiga xakamaynta oo lagu dhajiyay hal bandhig oo si fudud loogu dejiyo loona fiirsado. Ku qalabeysan yahay guddi taabasho taabasho ah oo ay maamusho barnaamijka microprocessor ee saxnaanta xakamaynta sare. Dareenka tirinta ayaa la adeegsadaa, waqtiga otomaatigga ah marka gacanta la hoos dhigo, wuxuu joojiyaa buuqa markuu gacanta kor u kaco.
4. [Tayada waarta] Qaybaha muhiimka ah waa alaabada ceyriinka ah ee la soo dhoofiyo dushana waxaa lagu daaweeyaa lacquer dhameeyaa taas oo ka dhigaysa mashiinka mid siman, xasiloon oo adkeysi leh
5. [Waxtarka sare] Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay noocyada qalimaanta, sida qalimaanta caaga ah, qalimaanta balastarka, iwm. 6 qalimaan ayaa lagu wada wareejin karaa hal mar.
6. [Waa fududahay in la qaado] Muuqaalku waa mid moodo oo qurux badan, ku habboon in la qaado, oo miisaankiisu fudud yahay
7.Touch shaashadda LED-ka ee mashiinka dubista koofiyadaha.
8.Waxa kuleylka kuleylka ee Silicone si uu u ilaaliyo qalinka, ka dhig shaabbada kulul mid aad ugu habboon.
9.A qalin qalin kasta, uma baahna daahan sublimation.
Qalimaankan Mashiinka saxaafadda Heat waxaa si weyn loogu isticmaalaa noocyada qalimaanta, sida qalimaanta caagga ah, qalimaanta ballpoint, iwm Laakiin qalimaanku waa inay ahaadaan kuleyl u adkaysta.
Dusha sare waa mid aan dheg-dhegeyn, ka-hortagga gubista wareejinta, umana baahna warqad silikoon / tiflon gooni ah.
10. [Ka dib adeegga iibka] Dammaanadda qanacsanaanta.Haddii sabab kasta ha noqotee aadan ku qanacsanayn, fadlan nala soo socodsii oo adeegga macaamiishayadu waxay ku dadaali doonaan inay ku caawiyaan.
Nooca: Mashiinka Saxaafadda Heat
Fasalka otomaatiga ah: buuga
Awoodda Guud: 350W
Codsi: qalin kasta oo maado ah, looma baahna daahan sublimation
Nooca Saxanka: Mashiinka sublimation
Cabirka (L * W * H): 48 * 42 * 37cm
Faa'iido leh: 6 Qalimaan hal mar
Aagga daabacaadda: Qalimaanta caaga ah (dhexroor laga bilaabo 8-10mm)
Warqad: warqad gudbinta qalinka
1 x Mashiinka Saxaafadda ee Kuleylka Qalabka Kuleylka ah
1 x Buugga Isticmaalka Ingiriisiga
Hore: Mashiinka saxaafadda kuleylka ah
Xiga: Mashiinka saxaafadda kuleylka ee Protale
Qalinka kuleylka saxaafadda